ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးေသာက္သံုးရာတြင္ | အိမ္မွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးေသာက္ျပီးေနာက္ ဘာေတြကို ေရွာင္ရမလဲ။? | HTU
၁၀ ပတ်မှ ၁၁ပတ်
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီးမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
အကယ်၍ ကျွန်မကအရမ်းဝတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင် ဆေးကိုပိုသောက်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
ယခင်က သောက်သုံးဖူးပါက ဆေးအာနိသင် လျော့နည်းနိုင်ပါသလား။
သားအိမ်တွင် IUD ထည့်ထားပါကလည်း misoprostol သောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါသလား။
နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်ပါကလည်း misoprostol ဆေးကို သောက်သုံးနိုင်ပါသလား။
HIV ရောဂါပိုးရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးကို သောက်နိုင်ပါသလား။
သံဓါတ်အားနည်းပါက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးကို သောက်သင့်ပါသလား။
အကယ်၍ ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားဖူးလျှင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသုံးဖို့ စိတ်ချရပါ့မလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသုံးပြီးနောက်မှ ကိုယ်ဝန်ဆက်လက်ရှိနေပါက မွေးလာတဲ့ ကလေးမှာ ချို့ယွင်းချက်တွေရှိနိုင်ပါသလား။
အရင်က သားကြောဖြတ်ဖူးသော်လည်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး ၎င်းမှာ သားအိမ်ပြင်ပတွင်ကိုယ်ဝန်တည်ခြင်း ဖြစ်နေပါသည်။ယခုလက်ရှိ ကိုယ်ဝန်ထပ်ရှိနေပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး သောက်သုံးဖို့ စိတ်ချရပါ့မလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးများမှာ မည်သို့ အာနိသင်ပြသနည်း။
Misoprostol ကို အိမ်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Misoprostol သောက်ပြီး ရေသောက်လို့ရပါသလား။
Mifepristone သောက်ပြီး ရေသောက်လို့ရပါသလား။
Misoprostol ကို လျှာအောက်တွင်ထားပြီး သောက်သင့်လား သို့မဟုတ် မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သင့်လား?
ဆေးနှစ်မျိုး mifepristone နှင့် misoprostolတွဲသောက်သုံးခြင်းနှင့် misoprostol တစ်မျိုးတည်းသောက်သုံးခြင်းက မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
misoprostol + mifepristone နှင့် misoprostol တစ်မျိုးတည်း သောက်သုံးခြင်းက မည်သို့ အာနိသင်ကွာခြားသနည်း။
Mifepristone သောက်သုံးပြီးပါက misoprostol ထပ်သောက်ရန် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။
မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင် အိမ်မှာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်သင့်ပါသနည်း။
Misoprostol များသုံးပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးဆင်းမှုနှင့် ကိုက်ခဲနာကျင်မှု မည်မျှ ရှိနိုင်သနည်း။
Misoprostol သောက်သုံးပြီး သွေးမဆင်းပါက မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်သနည်း။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျဆေးသောက်သုံးပြီး သွေးဆင်းမှုများနေပါက ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသောက်သုံးပြီးနောက် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုအတွက် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သနည်း။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသောက်သုံးပြီးပါက အရည်များကို ပုံမှန် သောက်နိုင်ပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသောက်သုံးနေစဥ်နှင့် သောက်ပြီးနောက် အရက်သောက်သုံးနိုင်ပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပျောက်ကင်းရန် အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
Misoprostol သောက်သုံးပြီးနောက် ဖျားနာခြင်း သို့မဟုတ် ပျို့အန်ခြင်းကိုခံစားရခြင်းမှာ ပုံမှန်လား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးများသောက်သုံးပြီးသော်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆက်ရှိနေပါက မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်သလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြင်း
ဆေးသောက်၍ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးသည့်နောက် မည်မျှအကြာတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနိုင်ပါသလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးသောက်ထားဖူးတယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းကလေးယူမယ်ဆိုရင် ကလေးမှာချို့ယွင်းချက်တွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးပါက နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ပြန်ဆောင်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲရှိပါသလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကို တားမြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းလား။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးနှင့် အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေး( EC Pill) တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ?
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် ဆေးသောက်ပြီးကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့်တူပါသလား။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် ခွဲစိတ်ကုသကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် တူပါသလား။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်ကို မည်သို့ဆက်သွယ်နိုင်မည်နည်း။
သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း ၁၁ ပတ်နှင့် အထက်ရှိနေခြင်း၊ mifepristone သို့မဟုတ် misoprostol နှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ပြီးတော့ တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်သည့် သွေးခဲတတ်ခြင်း နှင့် သားအိမ်ပြင်ပကိုယ်ဝန်တည်ခြင်း အစရှိသော ပြဿများထဲမှ တစ်ခုခုရှိနေခဲ့ပါလျှင် ဆေးကိုအိမ်မှာမသောက်သုံးသင့်ပါ။
HowToUseAbortionPill.org သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော 501c(3) အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်သည်။
HowToUseAbortionPill.org တွင် ပံ့ပိုးတင်ပြထားသော အကြောင်းအရာများသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတခုခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။